Naif isitayile sobuntwana sokuyilibala imithetho yemfundo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UNaif isitayile sabantwana esingoyikiyo esigcwele umbala
UPablo Gondar | | Ukuphefumlelwa, Ezahlukeneyo
Naif isitayile sokuyila esingaqhelekangal olibala imigaqo yokufunda ibonisa elona candelo lethu lingaphakathi, ukhaliphile kwaye ukhululekile, isitayile apho uloyiko luyanyamalala kwaye iba yimivumbo ekhawulezayo leyo abacingi ngezithethe nemithetho yokufunda kodwa bacacisa nje. Uhlobo kunye iintsingiselo zabantwana oko kusikhumbuza ngobuntwana bethu apho sasizobe ngaphandle kokucinga ngenye into.
Uhlobo lweNaif lubalasele ubuvuvu kunye nokuzithemba iziphumo zizele imibala eqaqambileyo, umbono ongenayo intuited kunye nomnqweno wokubonisa umhlaba apho intetho iyinto yesiqhelo kuphela. Isitayile esithi inokudityaniswa ngezinye iindlela ukufikelela kwiziphumo zokuyila. Umntwana ongaphakathi kuthi akufuneki afe kuba inxenye yawo ibonisa amandla ethu okudala.
El isitayela esingenalwazi Yiyo intshukumo yobugcisa ebonakaliswa bubukrelekrele kunye nokuzenzekelayo ngokudibanisa imibala eqaqambileyo ngombono we-intuited isikhumbuza ngobugcisa babantwana. Olu hlobo ayikhathazeki malunga nokumela inyani, vumela ukugeleza kwesandla kunye nesimbo sangaphakathi somntu ngamnye sivunyelwe ukuba sivele. Ngesitayile esingenalwazi singabantwana kwakhona siphinde silibale yonke imithetho esinyanzele ukuba sifunde ngokuhamba kwexesha, esi sitayile siyafa nemfundo.
Xa sifunda ukuzoba okanye ukulandela imigaqo le ndlela iyafa kuba silibale ukuzenzekela kunye nobuntwana obunintsi Ukugxila kwihlabathi eligcwele imigaqo. Ukuba sifuna ukwenza le ndlela kufuneka ulibale ngokupheleleyo ngemithetho yokuzoba kwaye sigxile kuphela ekuboniseni into esiyifunayo. Umntwana akoyiki ukuveza Kungenxa yoko le nto imizobo yabantwana inamandla kwaye iyile, thina njengabantu abadala kufuneka siphinde singene kolo luvo lokuzimela kwaye sizise amava kumava emisebenzi yethu.
Umgca okhululweyo, ulwelo olumanzi, iimilo ngaphandle kwamanqaku aphelileyo okanye ngokulula umzobo ogqityiweyo kodwa ushiye inyani ecaleni. Kuyenzeka ukuba ufumane ubuninzi bezitayile kunye nokwahluka kwe-naif kuba njengezinto zokudala sinakho dibanisa ubuchule kwaye wenze into entsha, ngenxa yesi sizathu amathuba abantu abangenamava phantse ukuba angenamda.
Isitayile esibanzi kakhulu kuba singasidibanisa nezinye iindlela zeplastiki ukufezekisa iziphumo zokuyila kunye needigri ezahlukeneyo zokubonisa, umzobo nge-inki enye awufani nomzobo onobuchule bekholaji, zombini zibonisa izinto ezahlukeneyo nokuba zikwisimbo somntwana. Kumfanekiso ongentla sinokubona umxube wesitayile esingaqondakaliyo ngobuchule bekholaji, omabini la mabinzana adityanisiwe ukufezekisa iziphumo ezitsha zokuyila, kule meko iimpembelelo zazivela kumagcisa amaninzi, UJavier Mariscal y UAndy Warhol.
Logama nje unento yokwenza ukuvakalisa, i isitayela esingenalwazi uya kuba neziphumo zokuyila kakhulu ngenxa yamandla akho angaphakathi vumela yonke into ngaphandle kwempazamo, ku funeka cinga njengabantwana kwakhona xa usebenza kolu hlobo kwaye ukulibala ukwenza ixabiso lokugweba malunga nokuba ichanekile okanye hayi. Khawufane ucinge, zama ezinye iindlela zobuchule kwaye uyeke ukucinga komntwana kubhabhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » UNaif isitayile sabantwana esingoyikiyo esigcwele umbala
Yintoni esinokuyifunda kwisiqalo somqambi uJessica Walsh?
Iicalligrapher ezifumaneka kuyilo lwegraphic kwaye kufuneka uyazi